अभिवृद्धि: यो के हो, विशेषता र महत्त्व | नेटवर्क मौसम विज्ञान
के हो अभिवृद्धि
जब हामी कुरा गर्छौं अभिवृद्धि हामी साना शरीरको एकत्रीकरण गरेर शरीरको बृद्धिलाई जनाउँदैछौं। यो मुख्यतया खगोल विज्ञान र खगोल भौतिकी को क्षेत्रमा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न घटनाहरू जस्तै काउस्टेलर डिस्क, एक्रेसन डिस्क वा पार्थिव ग्रहको संवर्धनको व्याख्या गर्न कार्य गर्दछ। ग्रह अभिवृद्धि सिद्धान्त १ 1944 XNUMX मा रूसी भूभौतिक विज्ञ ओटो श्मिटले प्रस्ताव गरेको थियो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई प्रशोधन र यसको महत्त्वको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
1 के हो अभिवृद्धि
2 संकलन को परिस्थितिहरु
3 एक कुशल प्रक्रिया को रूप मा एक्रेसन
4 कालो प्वालहरू पत्ता लगाउनको लागि उपयोगिता
अभिवृद्धि कसरी ताराहरू, ग्रहहरू र नेभलाबाट बनेका केहि उपग्रहहरू कसरी गठन भयो भनेर वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ धेरै आकाशीय वस्तुहरू छन् कन्डन्सेशन र इन्भर्स सब्सिमेसन द्वारा कणहरूको अभिवृद्धि द्वारा गठन गरिएको छ। ब्रह्माण्डमा यो भन्न सकिन्छ कि सबै एक तरीका वा अर्कोमा चुम्बकीय हो। प्रकृतिमा केहि सब भन्दा शानदार घटनाहरू चुम्बकीय हुन्।
धेरै फरक खगोल वस्तुहरूमा एक्रेसन अवस्थित छ। कालो प्वालमा पनि यो घटना अवस्थित छ। सामान्य र न्यूट्रन ताराहरूको पनि प्रशारण हुन्छ। यो प्रक्रिया हो जुन बाहिरबाट पनी विशेष तारामा खस्छ। उदाहरणको लागि, सेतो बौनेले लगाएको गुरुत्वाकर्षणको बलले यसमा द्रुतगतन खडा गर्दछ। सामन्यतया, एउटा तारा प्रायः ब्रह्माण्डमा तैरिरहन्छ जसको वरिपरि खाली ठाउँ थियो जुन व्यावहारिक रूपमा खाली थियो। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छैनन् जुन यस आकाशीय वस्तुमा द्रुतगतनको कारण हुन सक्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि अवसरहरू हुन्छन् जब यो।
हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं परिस्थितिहरू कुन हुन् जुन अभिवृद्धि हुन्छ।
संकलन को परिस्थितिहरु
एक अवस्था जसमा अभिवृद्धि हुन सक्छ आकाशीय पिण्ड त्यो हो कि यो ताराको साथीसँग अर्को स्टार छ। यी ताराहरू परिक्रमा गरेको हुनुपर्दछ। केहि अवसरहरुमा, साथी तारा यति नजिक छ कि मास यस्तो बल संग अर्को तानिन्छ कि तिनीहरू मा यो अन्त मा गिर। सेतो बौना एक साधारण तारा भन्दा आकार मा सानो छ, को जनसंख्या यो ठूलो गति मा यसको सतह पुग्न पर्छ। उदाहरण दिनुहोस् कि यो सेतो बौना होईन, तर न्यूट्रन तारा वा कालो होल हो। यस अवस्थामा, गति प्रकाशको वेगको नजिक छ।
जब यो सतहमा पुग्छ, तब द्रुतगतिमा द्रुत गति सुस्त हुनेछ कि गति लगभग प्रकाशको गतिबाट धेरै कम मानमा भिन्न हुन्छ। यो न्यूट्रन तारा भएको मामलामा हुन्छ। त्यो कसरी छ ठूलो मात्रामा उर्जा रिलीज हुन्छ जुन सामान्य रूपमा एक्स-रेको रूपमा देखिन्छ।
एक कुशल प्रक्रिया को रूप मा एक्रेसन
धेरै वैज्ञानिकहरूले प्रश्न गर्छन् कि द्रुतगतिलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका एक्रिएसन हो। हामीलाई थाहा छ, आइन्स्टाइनलाई धन्यवाद, उर्जा र द्रव्यमान बराबर छन्। १% भन्दा कमको क्षमताको साथ आणविक प्रतिक्रियाहरूको कारण हाम्रो सूर्यले ऊर्जा रिलिज गर्दछ। यद्यपि सूर्यबाट ठूलो मात्रामा उर्जा देखा पर्दछ, यो अयोग्य ढ released्गले रिलीज हुन्छ। यदि हामी न्यूट्रन तारामा मास ड्रप गर्छौं भने, झरेको सबै द्रव्यमानको लगभग १०% रेडियोधर्मी उर्जामा रूपान्तरण हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि यो ऊर्जा को रूप मा रूपान्तरण गर्न को लागी सबै भन्दा कुशल प्रक्रिया हो।
ताराहरू मासको ढिलो संचय द्वारा गठन हुन्छन् जुन उनीहरूको वातावरणबाट आउँदछ। सामान्यतया यो द्रव्ये आणविक बादलले बनेको हुन्छ। यदि हाम्रो सौर्यमण्डलमा एक अभिवृद्धि हुन्छ भने, यो धेरै फरक अवस्था हो। एक पटक यसको एकाग्रता आफैंको गुरुत्वाकर्षण आकर्षणबाट आफूलाई आकर्षित गर्न सुरु गर्न पर्याप्त घन भयो भने, यो तारा गठन गर्न गाढा हुन्छ। आणविक बादलहरू थोरै घुमाउँछन् र दुई चरणको प्रक्रिया हुन्छ। पहिलो चरणमा, क्लाउड घुम्दै डिस्कमा खस्छ। त्यस पछि, डिस्कले बीचमा तारा बनाउनको लागि बिस्तारै संकुचन गर्दछ।
यस प्रक्रियाको दौरानमा डिस्कहरूमा चीजहरू हुन्छन्। सबैमा सब भन्दा चाखलाग्दो डिस्कहरूको भित्र ग्रहहरूको गठन हुन्छ। सौर्यमण्डलको रूपमा हामीले के हेर्छौं त्यो मूल रूपमा एक अभिवृद्धि डिस्क थियो जसले सूर्यलाई उदय दियो। यद्यपि, सूर्यको निर्माणको क्रममा, डिस्कको धूलोको एक भागले सौर्यमण्डलमा रहेको ग्रहहरूलाई जन्म दिन थाल्यो।
यी सबैले सौर्यमण्डललाई धेरै समय अघि के भएको थियो भन्ने कुराको शेष बनाउँदछ। प्रोटोस्टेलर डिस्क ग्रह र ताराहरूको गठनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको लागि ठूलो महत्त्वको छ। आज वैज्ञानिकहरू निरन्तर अन्य ताराहरू वरपरका ग्रहहरू खोज्छन् जुन अन्य सौर्यमण्डलको नक्कल गर्दछ। यी सबै निकटसँग सम्बन्धित छ जसरी अभिवृद्धि डिस्कले काम गर्दछ.
कालो प्वालहरू पत्ता लगाउनको लागि उपयोगिता
वैज्ञानिकहरू सोच्दछन् कि सबै आकाशगंगाहरूको केन्द्रमा ब्ल्याक होल हुन्छ। तिनीहरू मध्ये केही छ ब्ल्याक होलहरू जुन अरबौं सौर्य जनको विशाल समूह हो। यद्यपि, अरूहरूसँग हामी जस्तो धेरै सानो ब्ल्याक होलहरू मात्र छन्। ब्ल्याक होलको उपस्थिति पत्ता लगाउन कुनै वस्तुको स्रोतको अस्तित्व थाहा पाउनु आवश्यक छ जुन त्यसलाई द्रव्यमानले पुर्‍याउन सक्छ।
यो सिद्धान्तमा आधारित छ कि ब्ल्याक होल एउटा बाइनरी प्रणाली हो जसमा चारैतिर तारा परिकार छ। आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तले भविष्यवाणी गर्दछ कि स्टार साथी ब्ल्याक होलको नजिक जान्छ जब सम्म यो नजिक जान्छ यसको मास छोड्दैन। तर ताराको परिक्रमणको कारण, यो सम्भव छ कि एक अभिवृद्धि डिस्क उत्पन्न भएको छ र मास ब्ल्याक होलमा समाप्त हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया धेरै सुस्त छ। जब केहि मास ब्ल्याक होलमा खस्छ, हराउनु अघि, यो प्रकाशको गतिमा पुग्छ। यो यस रूपमा चिनिन्छ घटना क्षितिज.
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले अभिवृद्धि र यसको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » के हो अभिवृद्धि